नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेपालको परिवेश र परिस्थितिसँग जोडेर राजनीतिक अध्ययन गर्दैनन् किन? तिनीहरूले सायद सिके प्रसाईंको ‘आजको सरल राजनीति’ पनि पढेका छैनन् होला। तर, अहिले अध्ययनशील भनेर मानिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता...
कोरोना भाइरस चीनको वुहान शहरमा पहिलोपटक देखा पर्‍यो। यो भाइरस चमेरा या सर्पबाट सरेको हो भनेर फेसबुके पाटीमा लेखियो पनि। तर, त्यो भाइरस चीनमा फैलिन पनि पाएन। वुहानमै त्यसको दाहसंस्कार भयो। त्यसपछि त्यो देखापर्‍यो दक्षिण कोरियामा। दक्षिण कोरियासँगै त्यो जाप...
भर्खरै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहजीको चिन्ता पढियो, 'नेपाल र भुटानसँगको खुला सिमानाका कारण भारतलाई सदैव अप्ठेरो परेको छ।’ ठीकै छ त्यसो भए सिमानामा काँडेतारको बार लगाइदिनुस् न त! कुरो सक्किगोनि। हामी दुईवटा मुलुकका लागि यो काँडेतार ल...
उमेरको अर्थ राजनीतिमा पनि हुन्छ। ‘प्रजातन्त्र’ पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको भनिएका, अमेरिका र भारत यी दुवै राष्ट्र अहिले अप्ठेरोमा छन्। अमेरिकाका श्रीमान् राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतका माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमान् मोदी दुवै बुढा भएका छन्। त्यसैले दुवैजन...